Embodying the Tao : 1st verse of Tao Teh Ching | ZAYYA
Just Be. That's Enough!
← ဘေဘီ စကြာဝဠာ
The still Mind →
Embodying the Tao : 1st verse of Tao Teh Ching
ဤစာ၏ ရည်ရွယ်ရင်းမှာ — အတွေးအမြင်အနေအားဖြင့် ဘ၀လမ်းအတွင်း ငြိမ်းအေးစေနိုင်ဖို့ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျနော်လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အကျော်ကာလကတည်းက တမ်းတခဲ့သော ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုကို ကြိုးစားကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်လာမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
( အောက်ပါစာတို့တွင် ထေရ၀ါဒ ဟူသောစကားလုံးကို အနည်းငယ် သုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ ယင်းအသုံးအနှံးကို အသုံးပြုရခြင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာနေရာ၌
ကျနော့်အနေဖြင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှဖြစ်သည် ဟု အယူရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်၏ အယူမှားခဲ့သည်ရှိသော် ကျနော်၏တာဝန်သာဖြစ်ပြီး။တကယ့်အစစ်အမှန်ရှိသော ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မည်သို့မှ သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း နားလည်ပေးစေလိုသည်။)
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ယှဉ်ထိုး၍ ဖြစ်စေ၊ ယှဉ်ပြိုင်၍ဖြစ်စေ၊ ဆက်နွယ်၍ဖြစ်စေ ပြဆိုတတ်ကြသည်မှာ အများအားဖြင့် အိန္ဒိယ မှ စင်ပြိုင်ဝါဒများဖြစ်ကြသော ဂျိန်း၊ သချာင်္ဒဿန၊ ဝေဒန္တစသည်တို့နှင့်သာ
ယှဉ်တွဲဖော်ပြတတ်ကြပါသည်..။ယင်းတို့မှ လွဲလျင် တရုတ်မှ မဟာယာန၊ ဂျပန်ပြည်မှ ဇင်( ဈာန်)ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ပြတတ်ကြသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရဖူးပါသည်…။ကျနော်ယခုရေးလိုသော တာအိုဘာသာနှင့်တွဲယှဉ်၍ ဖော်ပြတတ်ကြသောစာရွက်စာတမ်းများကား မရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ မရှိမဟုတ် ၊ ရှိသော်လည်း ရှားပါးလှသည်။( အခြားဘာသာစကားများဖြင့်မူ အများအပြားရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းစာရေးသူများသည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုထဲထဲ ၀င်ဝင် မသိဘဲ သမိုင်းအထောက်အထား အချက်အလက် ၊ကျမ်းကိုး ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်မျှဖြင့် ဝေဖန်ရေးသားနေကြသည် ဟု ထင်သည် ။)..မြန်မာဘာသာဖြင့် သိသာထင်ရှားစွာရှိသော စာမှာ ဆရာသက်လုံ၏ စေ့ထားသော တံခါးများအတွဲ(၁)နှင့်အတွဲ (၂ ) ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းတွင်မူ ထေရ၀ါဒဟူသောအမြင်ထက်
. ဝေဒအမြင်နှင့်လည်းကောင်း ၊ စိတ်ပညာအမြင်နှင့်လည်းကောင်း တင်ပြထားသည်ဟု
ကျနော်မှတ်ယူထားပါသည်။ ကျနော့အနေဖြင့်လည်း ဆရာသက်လုံသည်သာ
သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးလျင် သိချင်လှသောမေးခွန်းများ မေးရန်
တာအိုဘာသာသည် မူရင်းအားဖြင့် ဘာသာရေးတစ်ခုမဟုတ်ပေ။အတွေးအမြင်စာစုသက်သက်သာဖြစ်ပြီး…နောက်ပိုင်းမှသာ ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားလာကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် သမ္မာကျမ်းစာ၊ မွတ်ဆလင်ဘာသာတွင်
ကိုအာရ် ကျမ်းစာ စသည်အသီးသီး ရှိသကဲ့သို့ – ယခု တာအိုဘာသာတွင်လည်း ကျမ်းစာရှိပါသည် ။လေ့လာကြသော ဆရာ့ဆရာ သုတေသီများ၏ အဆိုအရ –
ယင်းကျမ်းသည် ကမ္ဘာ့ဒဿန စာပေနယ်တွင် အသေးငယ်ဆုံးသောကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။အပိုဒ်ရေ ၈၁ ပိုဒ် ပါဝင်ပြီး တရုတ်ဘာသာဖြင့် အပြည့်အစုံဖော်ပြလျင် ယနေ့ခေတ်တရုတ်သတင်းစာ စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာတည်းနှင့်ပင် ဖော်ပြနိုင်သည် ဟု အဆိုရှိသည်။ ပသို့ဆိုစေ… ဤကျမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွင့်ဆိုကြသော ဋီကာများ ..အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၊တရုတ်ဘာသာတို့ဖြင့် အများအပြားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ယင်းအတွက် နှစ်ခြိုက်သောသူများရှိနိုင်သလို မနှစ်ခြိုက်သောသူများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ အယူဝါဒတစ်ခုအတွက် လူသားတိုင်းလွတ်လပ်စွာ စဉ်းစား လက်ခံ( သို့မဟုတ် ) ပယ်ချနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
လိုအပ်သော အတွေးပိုင်းလောက်ကို သာ တင်ပြလိုသော ဆန္ဒကြောင့် ဤကျမ်း၏ သမိုင်းနှင့်တကွ …အချီးနိဒါန်းကို ပယ်လှပ်ထားခဲ့ပါမည်။
ပြောဟောပြရုံမျှဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသွားသော ဓမ္မသည်
မှန်ကန်သော ဓမ္မတရား မဟုတ်ချေ။
အမည်နာမ တပ်စွဲခေါ်ဝေါ်ထားသော အမည်နာမသည်လည်း
ကောင်းကင်နှင့် မြေပထ၀ီတို့၏ အစဖြစ်လာ၏။
လောက သုံးပါး၏ မိခင်ဖြစ်လာ၏ ။
အလိုဆန္ဒထာဝရကင်းမဲ့ခြင်းဖြင့် အရာအားလုံးကို ရှာတွေ့နိုင်၏။
လျို့ ၀ှက်သော နက်နဲမှုဖြင့် အားလုံးကို ကြားနိုင်၏ ။
အရာရာ၏ ပြင်ပ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို မြင်ရ၏။
ဤသဘောနှစ်ဘက်သည် အမှန်စင်စစ် တူညီပြီး
ဖြစ်ပေါ်ရာကို မူတည်၍ကား ကွဲပြားနေရခြင်းဖြစ်၏။
ယင်းတို့ကို ပေါင်းစည်း၍ နက်နဲမှု ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
နက်နဲမှု၏ အနက်နဲဆုံးသည် နူးညံ့အံ့ဩဖွယ်သော အရာတို့၏ တံခါးဝ ပင် ဖြစ်၏။
Filed under wisdom
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.
Calendar: Your Precious Time
Archives Select Month February 2018 (8) January 2018 (19) January 2015 (2) November 2013 (1) September 2012 (3) August 2012 (27) July 2012 (7) June 2012 (12) May 2012 (15) April 2012 (33) March 2012 (8) February 2012 (23) January 2012 (10) December 2011 (29) November 2011 (42) October 2011 (21) September 2011 (1) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (27) May 2011 (31) April 2011 (18) March 2011 (9) February 2011 (25) January 2011 (29) December 2010 (35) November 2010 (20) October 2010 (13) March 2010 (2) February 2010 (2) December 2009 (12)
Categories Select Category AungSan (29) eBook (18) Gurdjieff (3) mood (184) Opinion (58) Osho (183) Photo Essay (5) philosophy (80) Krishnamurti (11) poem (57) Music (1) science (42) maths (10) Physics (6) Techno (12) wisdom (113) Death (2) Economic (1) essay (6) essay (2) Literature (4) physics (1) Politics (9)
ဂန္ဓာရီသဘောလာ သံလိုက်အားပညာနှင့် ဂုဂျိယဖ်
“The Professor and the Madman” ~ Simon Winchester
ဂုဂျိယဖ် George Ivanovich Gurdjieff
ယန်းပေါလ်ဆက်ကြီးရယ် ခင်ဗျား မှားခဲ့တယ်
ဒါတွေဟာလည်းပဲ (Zen Story)
သူရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်၊ မရယ်
Ode to Joy ကို ပြန်ဆိုကြည့်ခြင်း
ပစ္စုပ္ပန် ~ ပါရဂူ
Letter from Osho (4)
Letter from Osho (3)
Letter from Osho (2)
Letter from Osho (1)
Letters from Osho (5)
ဆိတ်ငြိမ်မှု (တစ်ခုတည်းသော ဘာသာစကား)
answer aung san beauty being bogyoke Buddha buddhism Burma death dhamma download dream education Einstein essay fear feature feel freedom future god Heaven independence India japan LaoTzu Lao Tzu life literature Logic love maths meditation mind monk mood moon moral myanmar nature news now opinion Osho past philosophy physics poem politics present problem psychology question religion science social Tao Thakhin theory thinking truth universe university war wisdom word words world yangon zen ကဗျာ ဂီတ ပါရဂူ ဘာဝနာ အိုရှိုး